Proverb 460 Andriamanitra eny ho eny ihany. [Veyrières 1913 #3]
Proverb 461 Andriamanitra mby an-trano . [Veyrières 1913 #4]
Proverb 462 Andriamanitra nanome , fa i Balita no tsy ambinina . [Rinara 1974 #218]
Proverb 463 Andriamanitra no hamaly ka ho tonga tohatra hiakaranareo any an--danitra . [Veyrières 1913 #3]
Izay homenareo anie dia anjary tohatra hiakaranareo any an--danitra . [Veyrières 1913 #3]
Proverb 464 Andriamanitra tsy andrin' ny maika , andriko ihany. [Veyrières 1913 #6, Cousins 1871]
Andriamanitra tsy andrin' ny olona , andriko ihany. [Houlder 1895 #26, Rinara 1974 #219, Cousins 1871]
Andriamanitra tsy andrin' ny olona , andriko ihany ; fa tsy an' ny irery izy. [Veyrières 1913 #6]
Proverb 465 Andriamanitra tsy any ny irery. [Cousins 1871 #204]
Proverb 466 Andriamanitra tsy azo iambohoana . [Veyrières 1913 #9]
Proverb 467 Andriamanitra tsy eny ho eny ihany. [Cousins 1871]
Proverb 468 Andriamanitra tsy mba lavitra . [Veyrières 1913 #10]
Proverb 469 Andriamanitra tsy mba mankarary olona . [Veyrières 1913 #11]
Proverb 471 Andriamanitra tsy tia ratsy . [Houlder 1895 #18, Cousins 1871 #205]
Proverb 659 Arahaba nomen' Andriamanitra ny fara . [Veyrières 1913 #4106]
Proverb 774 Avo fijery Andriamanitra , ka mahita ny takona. [Nicol 1935 #51]
Avo fijery ny Andriamanitra , ka mahita ny takona. [Cousins 1871 #327]
Proverb 962 Aza manao an' Andriamanitra tsy misy ka mitsambiki-mikimpy . [Rinara 1974 #491]
Manao an' Andriamanitra fa tsy hisy, ka mitsambiki-mikimpy . [Veyrières 1913 #33]
Manao an' Andriamanitra tsy hisy, ka mitsambiki-mikimpy . [Houlder 1895 #14]
Manao an' Andriamanitra tsy misy ka mitsambiki-mikimpy . [Rinara 1974 #1984]
Manao Andriamanitra tsy hisy, ka mitsambiki-mikimpy . [Veyrières 1913 #33, Nicol 1935 #54, Cousins 1871]
Tsy mety raha manao an' Andriamanitra tsy misy, ka hitsambiki-mikimpy . [Rinara 1974 #4612]
Proverb 1508 Aza ny lohasaha mangina no jerena , fa Andriamanitra an-tampon , ny loha . [Veyrières 1913 #20]
Aza ny lohasaha mangingina no heverina, Andriamanitra no ambonin' ny loha . [Veyrières 1913 #11]
Aza ny lohasaha mangingina no heverina, fa Andriamanitra ambonyloha . [Veyrières 1913]
Aza ny lohasaha mangingina no heverina, fa Andriamanitra no ambonin’ ny loha . [Houlder 1895 #16, Cousins 1871 #696, Nicol 1935]
Proverb 1853 E! Andriamanitra nahary tongotra aman-tanana . [Veyrières 1913 #25]
Zanahary nahary tongotra aman-tanana . [Veyrières 1913 #25]
Proverb 2243 Haitraitra an' olombelona , fa ny didy an' Andriamanitra . [Rajemisa 1985]
Haitraitra an' olombelona , zaka an' ny Nahary , fa Andriamanitra ihany no tompon' ny didy . [Rinara 1974 #84]
Haitraitra no an' olombelona , fa ny didy an' Andriamanitra . [Veyrières 1913 #26]
Haitraitran’ olombelona zaka-Nanahary , fa Andriamanitra ihany no mandidy . [Cousins 1871, Nicol 1935]
Haitraitr' olombelona, zaka-Nanahary , fa Andriamanitra ihany no mandidy . [Houlder 1895 #28]
Haitraitr' olombelona zakana Nahary , fa Andriamanitra no mandidy . [Veyrières 1913 #26]
Proverb 2483 Hotahin' Andriamanitra . [Veyrières 1913 #29]
Proverb 2501 Ihiratan' Andriamanitra . [Veyrières 1913 #30]
Proverb 2514 Ilaikamo mindram-pangady , ka "aza mahita anie aho". [Rajemisa 1985]
Ilay kamo mindram-pangady ; koa, "Aza mahita anie aho" . [Houlder 1895]
Lay kamo mindram-pangady , ka aza mahita anie aho, Andriamanitra . [Veyrières 1913 #3952]
Ny kamo mindram-pangady , ka aza mahita anie aho. [Veyrières 1913 #3952]
Proverb 2755 Jamba nitsapa sokina ka tsy navelan' Andriamanitra hihinam-boalavo . [Rinara 1974 #1554]
Proverb 3092 Lasan' Andriamanitra . [Veyrières 1913 #31]
Proverb 3531 Manao ambany maso tsy tsinjo ka mila haratsian-ko an-tena. [Veyrières 1913 #1095]
Manao ambany maso tsy tsinjo ka mila haratsian-ko an-tena, ka matahora an' Andriamanitra , fa tsy olona mitovy hasina aminy hianao. [Veyrières 1913 #32]
Proverb 3535 Manao Andriamanitra takona , ka maka ny an' ny sasany. [Veyrières 1913 #34]
Proverb 3676 Mandeha irery, sahalain' Andriamanitra ; mandeha roa, sahalain' olombelona. [Houlder 1895 #24, Cousins 1871 #1581]
Proverb 4692 Na dia manarona akoho aza, raha mby amy ny omen’ Andriamanitra , dia manana. [Cousins 1871]
Proverb 4830 Na tsy valiko aza, valin' Andriamanitra . [Veyrières 1913 #38]
Proverb 4840 Ny adala no tsy ambakaina , Andriamanitra no atahorana . [Rajemisa 1985 #57, Cousins 1871 #2119, Nicol 1935 #55]
Proverb 5008 Ny didin' Andriamanitra tahaka ny masoandro avy andrefana , ka mitsidika isam-baravarana . [Rinara 1974 #2926]
Ny didin’ Andriamanitra tahaka ny masoandro avy any andrefana , mitsidika isam-baravarana . [Cousins 1871 #2198, Nicol 1935]
Ny didin' Andriamanitra tahaky ny masoandro avy any andrefana : mitsidika isam-baravarana . [Veyrières 1913 #40]
Proverb 5010 Ny didy sy lahatra kosa an' Andriamanitra . [Veyrières 1913 #41]
Ny fikasana no an' olombelona , fa ny didy an' Andriamanitra . [Veyrières 1913 #41]
Proverb 5204 Ny iray tahitahin' olombelona, fa ny iray tahitahin' Andriamanitra . [Houlder 1895 #23, Cousins 1871 #2272]
Ny iray tahitahin' olombelona , ny iray tahitahin' Andriamanitra . [Veyrières 1913 #42]
Proverb 5417 Ny olombelona voatr' ampangoro ka mifamadibadika ambony sy ambany. [Rinara 1974 #3185]
Ny olombelona voatr' ampangoro , ka mifandimby ambony sy ambany. [Houlder 1895 #5]
Ny olombelona voatr’ ampangoro : mifandimby ambony sy ambany. [Cousins 1871 #2372, Nicol 1935 #472]
Voatr' ampangoro ny olombelona , ka mifandimby ambony sy ambany : zokiny anio , zandriny rahampitso , fa Andriamanitra no misahala. [Veyrières 1913 #2758]
Voatr' ampangoro ny olona , ka mifandimby ambany sy ambony : zokiny anio , zandriny rahampitso , fa Andriamanitra no misahala. [Veyrières 1913 #2758]
Proverb 5527 Ny tahotra an' Andriamanitra mahafaka ny tahotra ny olombelona . [Veyrières 1913 #44]
Proverb 5632 Nitsapa sokin-tsy nahazo ka tsy navelan' Andriamanitra hihinam-boalavo . [Rinara 1974 #2799]
Proverb 5701 Ny vintana tsy azon' olona ovana , fa didy avy amin' Andriamanitra . [Veyrières 1913 #101]
Proverb 5892 Onony ny alahelo fa anjara omen' Andriamanitra izao, fa tsy misy tsy ho any tsy akory. [Veyrières 1913 #4153]
Proverb 5978 Rafotsibe mita rano : izay hahasoa ataovin' Andriamanitra , na ho rendrika , na ho tafita . [Veyrières 1913]
Rafotsibe nita rano : izay hahasoa ataovin' Andriamanitra , na ho rendrika na ho tafita . [Rinara 1974 #3530, Cousins 1871 #2623]
Rafotsibe nita rano, ka "Izay hahasoa ataovin' Andriamanitra , na ho rendrika , na ho tafita !". [Houlder 1895]
Proverb 6032 Raha hianao no miteny : hetsika Andriananahary , fa raha olona kosa no miteny : tangena ambony varavarana . [Rinara 1974 #3570]
Proverb 6340 Resen' Andriamanitra tsy tonga olona . [Veyrières 1913 #50]
Proverb 6410 Sahalain' Andriamanitra . [Veyrières 1913 #51]
Proverb 7072 Toa an' ilay jamba nomena amalona : koa "Amalona , hono , ity, Andriamanitra !". [Cousins 1871 #3098, Houlder 1895]
Proverb 7104 Toy ny akoho kely misotro rano : Andriamanitra no andrandrainy . [Veyrières 1913 #56]
Proverb 7133 Toy ny kamboty mivozihi-kibo , ka nahazo ny havokisana . [Houlder 1895 #1905]
Toy ny kamboty mivozihi-kibo , ka nomen' Andriamanitra ny fahavokisana . [Rinara 1974 #4294]
Toy ny kamboty mivozihi-kibo , nomen' Andriamanitra ny havokisana . [Veyrières 1913 #57, Cousins 1871 #3204]
Proverb 7341 Trafon' omby ririnina , ka lasan' Andriamanitra nanao azy. [Veyrières 1913 #58, Cousins 1871 #3264]
Proverb 7564 Tsy mandidy alohan' Andriamanitra aho, fa izay zara -vintana lolohavina . [Houlder 1895 #31]
Proverb 7784 Tsy misy tsy fantatr' Andriamanitra , saingy minia miondrika izy. [Houlder 1895 #17]
Tsy misy tsy fantatr' Andriananahary , fa saingy minia miondrika izy. [Veyrières 1913 #59]
Tsy misy tsy fantatr' Andriananahary , fa saingy miondrika izy. [Veyrières 1913 #59]
Tsy misy tsy fantatr' ilay Nanahary , fa minia miondrika izy. [Rinara 1974 #308]
Tsy misy tsy fantatr' Ilainanahary , saingy minia miondrika izy. [Cousins 1871]
Tsy misy tsy fantatr' Ilainanahary , sangy minia miondrika izy. [Veyrières 1913 #692]
Proverb 8283 Vody varin’ Andriamanitra ny olona : izay tiany halaina no alainy, ary izay tiany havela no avelany. [Cousins 1871 #3718, Veyrières 1913]
Proverb 8329 Vonoin-Andriamanitra . [Veyrières 1913 #61]